Ulwazi - Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Ulwazi oluyisisekelo lwehhanisi lezintambo zezimoto
Izintambo zokubopha izintambo zezimoto
Izintambo zokubophela izintambo zezimoto (amahanisi wezintambo zezimoto) ibona ukuxhumana okukhona kokuphakelwa kwamandla kanye nezingxenye ezahlukahlukene zikagesi emotweni. Amahhanisi entambo asatshalaliswa yonke imoto. Uma injini iqhathaniswa nenhliziyo yemoto, i-harness wiring iyisistimu yenethiwekhi yemoto, ebhekele ukudluliswa kolwazi phakathi kwezingxenye ezahlukahlukene zikagesi wemoto.
Kunezinhlobo ezimbili zezinhlelo zokukhiqiza i-wiring harness harness
(1) Ihlukaniswe amazwe aseYurophu nawaseMelika, kufaka phakathi iChina, uhlelo lwe-TS16949 lusetshenziselwa ukulawula inqubo yokukhiqiza.
(2) Ikakhulu eJapan: iToyota, iHonda, banezinhlelo zabo zokulawula inqubo yokukhiqiza.
Abakhiqizi bezintambo zezintambo zezimoto banolwazi lwabo futhi banamathisela ukubaluleka kokuhlangenwe nakho kokukhiqizwa kwamakhebuli nokulawulwa kwezindleko zekhebula. Izitshalo zokubopha izintambo ezinkulu zomhlaba zisekelwe kakhulu ezintanjeni nasezintambo, njenge-Yazaki, iSumitomo, iLeni, iGuhe, iFujikura, i-kelop, i-Jingxin, njll.
Isingeniso esifushane sezinto ezijwayelekile zokubophela izintambo zezimoto
1. Ucingo (ucingo olunamandla amancane, 60-600v)
Umugqa ojwayelekile kazwelonke: QVR, QFR, QVVR, qbv, qbv, njll
Ukumaka kwansuku zonke: AV, AVS, AVSS, AEX, AVX, cavus, EB, TW, she-g, njll
Ukumakwa kwesiJalimane: i-flry-a, i-flry-b, njll
Ulayini waseMelika: Sxl, njll
Ukucaciswa okuvamile kuyizintambo ezinendawo esezingeni elilinganiselwe engu-0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 mm
Emgodleni (iraba igobolondo) ngokuvamile eyenziwe ngepulasitiki. Umqhubi we-terminal ecindezelwe ufakwa kuwo ukuqinisekisa ukuthembeka kokuxhumeka. Okuqukethwe ikakhulu kufaka i-PA6, PA66, ABS, PBT, PP, njll
Ingxenye yehardware emise okwehlisiwe ocingweni ukuxhuma izintambo ezahlukahlukene zokudlulisa amasiginali, kufaka phakathi ukuphela kwabesilisa, ukuphela kwabesifazane, ukuphela kweringing kanye nokugcina okuyindilinga, njll.
Izinto ezisemqoka ziyithusi nethusi (ubulukhuni bethusi buphansi kancane kunobo bethusi), futhi ne-akhawunti yethusi inengxenye enkulu.
Izesekeli ze-Sheath: I-bolt engenamanzi, ipulagi engaboni, indandatho yokufaka uphawu, ipuleti yokukhiya, i-clasp, njll
Imvamisa isetshenziselwa ukwakha isixhumi nge-sheath terminal
3. Ngokusebenzisa izimbobo zenjoloba yomgodi
Inemisebenzi yokuqina kokugqoka, ukungena kwamanzi nokufaka uphawu. Isatshalaliswa ikakhulu kusixhumi esibonakalayo phakathi kwenjini neklabhu, i-interface phakathi kwekhabhathi langaphambili nekhebhu (kwesobunxele nangakwesokudla ngokuphelele), ukuxhumana phakathi kwezicabha ezine (noma umnyango wangemuva) nemoto, nethangi likaphethiloli itheku.
Okususelwa ekuqaleni, okuvame ukwenziwa ngepulasitiki, kusetshenziselwa ukubopha izintambo zokubopha izintambo emotweni. Kukhona izibopho, izibopho zokukhiya izifutho.
5. Pipe impahla
Ihlukaniswe ngamapayipi lukathayela, ipayipi lokushisa elishisayo le-PVC, ipayipi le-fiberglass. Ipayipi elilukiwe, ipayipi elijikayo, njll. Ukuvikela amahanisi wezintambo.
Ngokuvamile, cishe kusetshenziswa izifutho ezingama-60% noma ngaphezulu. Isici esiyinhloko ukumelana nokugqoka okuhle, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuvimbela ilangabi nokumelana nokushisa kuhle kakhulu endaweni ephezulu yokushisa. Ukumelana lokushisa izifutho - 40-150 ℃. Indaba yayo ngokuvamile ihlukaniswe yaba yi-PP ne-pa2. I-PA ingcono kune-PP ekubambeni ilangabi nokugqokwa kokuqina, kepha i-PP ingcono kune-PA ekukhatheni okugoba.
② Umsebenzi wepayipi elishisa ngokushisa le-PVC liyafana nelipayipi likathayela. PVC ipayipi eguquguqukayo futhi eguqa ukusonteka ukumelana muhle, futhi PVC ipayipi ngokuvamile ivaliwe, ngakho PVC ipayipi is ikakhulukazi esetshenziswa egatsheni ukugoba amahanisi, ukuze wenze ushintsho bushelelezi wire. Izinga lokushisa lokumelana nokushisa kwepayipi le-PVC aliphezulu, ngokuvamile lingaphansi kwama-80 ℃.
Iteyipu yokukhiqiza: isilonda ebusweni be-harness harness. (ihlukaniswe nge-PVC, itheyiphu yesipanji, itheyiphu yendwangu, itheyiphu yephepha, njll.). Iteyipu yokuhlonza ikhwalithi: isetshenziselwa ukukhomba ukukhubazeka kwemikhiqizo yokukhiqiza.
Iteyipu idlala indima yokubopha, ukumelana nokwembatha, ukwahlukanisa, ukuvimbela ilangabi, ukunciphisa umsindo, ukumaka neminye imisebenzi kusigaxa sezintambo, esivame ukubala cishe ama-30% wezinto ezibophayo. Kunezinhlobo ezintathu zeteyiphu zokufakwa ezintanjeni ngocingo: itheyiphu ye-PVC, itheyiphu ye-flannel yomoya neteyipu eyisisekelo yendwangu. Iteyipu ye-PVC inokuqina okuhle kokugqoka nokugodla ilangabi, futhi ukumelana kwayo nezinga lokushisa cishe kungama-80 ℃, ngakho-ke ukusebenza kwayo kokunciphisa umsindo akukuhle futhi intengo yayo iphansi kakhulu. Indaba ka yefulaneli tape base indwangu tape kuyinto isilwane. Itheyiphu ye-flannel inokusebenza okuhle kakhulu kokubopha nokunciphisa umsindo, futhi ukumelana nokushisa kumayelana ne-105 ℃; ithephu yendwangu inokumelana okuhle kakhulu kokugqoka, futhi ukumelana okushisa okuphezulu cishe kungama-150 ℃. Ububi obujwayelekile beteyipu ye-flannel kanye neteyipu eyisisekelo yendwangu ukubambezeleka okuncane kwelangabi nentengo ephezulu.
Ulwazi lokuhlanganisa izintambo zezintambo zezimoto
Izintambo zokubopha zezimoto
Amahhanisi ezintambo zezimoto angumzimba omkhulu wenethiwekhi yesekethe yezimoto. Ngaphandle kwezintambo zokubopha izintambo, ngeke kube khona ukujikeleza kwezimoto. Njengamanje, noma ngabe kuyimoto kanokusho noma imoto yezomnotho, amahanisi wezintambo ngokufanayo ayafana, enezintambo, izixhumi neteyipu yokugoqa.
Ucingo lwezimoto lubizwa nangokuthi ucingo olunezinga eliphansi, oluhlukile kunentambo ejwayelekile yasendlini. Ucingo olujwayelekile lwasekhaya luyintambo eyodwa yocingo, ngobulukhuni obuthile. Izintambo zemoto ziyizintambo eziwucingo ezi-core multi, ezinye zazo zincane njengezinwele. Izintambo eziningana noma eziningi zensimbi ezithambile zisongwe ngamapayipi afakwe ngopulasitiki (PVC), athambile futhi akulula ukugqashula.
Ukucaciswa okujwayelekile kwezintambo ezintanjeni zezintambo zezimoto kufaka phakathi izintambo ezinendawo yokuwela engaphansi engu-0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0, njll. Ngayinye yazo inenani lamanje lokulayisha elivumelekile, elisetshenziselwa izintambo kwemishini ehlukile yokusebenzisa amandla. Thatha amahanisi wemoto njengesibonelo, umugqa wokucaciswa ongu-0.5 usebenza kulambu lensimbi, isibani senkomba, isibani somnyango, isibani sophahla, njll .; Umugqa wokucaciswa ongu-0.75 ulungele ilambu lepuleti lelayisense, amalambu amancane ngaphambili nangemuva, isibani sebhuleki, njll .; Umugqa wokucaciswa we-1.0 ulungele isibani sesignali yokujika, isibani senkungu, njll .; 1.5 umugqa sebhithi kufanelekile headlamp, uphondo, njll .; ulayini omkhulu wamandla njengocingo lwe-generator armature, ucingo olumisa phansi, njll. Lokhu kubhekisa kuphela emotweni ejwayelekile, ukhiye uncike kunani eliphakeme lamanje lomthwalo. Isibonelo, ucingo lwaphansi lwebhethri nolayini wamandla omuhle kusetshenziselwa ngokwehlukana izintambo zezimoto. Olimitha babo bezintambo bukhulu ngokwanele, okungenani ngaphezu kwamamilimitha ayisikwele ayishumi. Lezi zingcingo ze- "Big Mac" ngeke zifakwe kwi-harness enkulu.
Ngaphambi kokuhlela amahanisi wezintambo, umdwebo wokuhlanganisa izintambo kufanele udwetshwe kusengaphambili, okuhlukile kumdwebo wesifunda wesikimu. Umdwebo wesikimu wesekethe isithombe esichaza ubudlelwano phakathi kwezingxenye ezahlukahlukene zikagesi. Akukhombisi ukuthi izingxenye zikagesi zixhunywe kanjani, futhi akuthintwa usayizi nokuma kwengxenye ngayinye kagesi nebanga eliphakathi kwazo. Umdwebo wehhanisi yezintambo kufanele ucabangele usayizi nokuma kwengxenye ngayinye kagesi nebanga phakathi kwazo, futhi kukhombise nokuthi izingxenye zikagesi zixhumene kanjani.
Ngemuva kokuthi uchwepheshe wefektri yokuhlanganisa izintambo enze ibhodi yokuhlanganisa izintambo ngokusho komdwebo wehhanisi lezintambo, isisebenzi sizosika ucingo nentambo ngokuya ngemithetho yebhodi lezintambo. Amahhanisi amakhulu ayo yonke imoto ngokuvamile ahlukaniswe yenjini (ukuthungela, i-EFI, ukukhiqizwa kwamandla, ukuqala), insimbi, ukukhanyisa, ukufakwa komoya, izinto zikagesi ezisizayo nezinye izingxenye, kufaka phakathi amahanisi amakhulu kanye nehhanisi legatsha. Ihhanisi elikhulu lemoto linezintambo zokubophela izintambo zamagatsha amaningi, njengepali lomuthi negatsha. Iphaneli lensimbi liyingxenye esemqoka yehhanisi eliyinhloko lemoto yonke, elekela emuva naphambili. Ngenxa yobudlelwano obude noma ukuhlangana okulula nezinye izizathu, ukuboshwa kwentambo kwezinye izimoto kuhlukaniswe kwaba amahhanisi ekhanda (kufaka phakathi insimbi, injini, ukuhlangana kwelambu langaphambili, i-air conditioner, ibhethri), amahanisi angemuva (umhlangano wesibani somsila, isibani sepuleti selayisense, isibani sesiqu), amahanisi ophahla (umnyango, isibani sophahla, uphondo lomsindo), njll. Umkhawulo ngamunye wehhanisi uzomakwa ngezinombolo nezinhlamvu ukukhombisa into exhunywayo yocingo. U-opharetha angabona ukuthi uphawu lungaxhunywa kahle ezintanjeni ezihambisanayo nakumadivayisi kagesi, alusizo ikakhulukazi lapho kulungiswa noma kushintshwa i-harness. Ngasikhathi sinye, umbala wocingo uhlukaniswe waba ulayini wombala owodwa nomugqa wombala ophindwe kabili. Inhloso yombala nayo icacisiwe, okuvamise ukuba yisilinganiso esijwayelekile esenziwe ngabakhiqizi bezimoto. Izindinganiso zemboni yaseChina zichaza kuphela umbala oyinhloko, ngokwesibonelo, kusetshenziswa omnyama oyedwa ocingweni lokumisa, i-red monochrome isetshenziselwa ulayini wamandla, ongakwazi ukudideka.
Izintambo zokubopha izintambo zisongwe ngentambo ephothiwe noma itheyiphu epulasitiki. Ukuze kube lula ukuphepha, ukucubungula nokulungisa, ukusongwa kwentambo okususiwe kususiwe. Manje isongwe ngephepha lepulasitiki elinamathelayo. Isixhumi noma i-lug sisetshenziselwa ukuxhumana phakathi kwehhanisi kanye nehhanisi naphakathi kwehhanisi nezingxenye zikagesi. Isixhumi senziwe ngepulasitiki futhi sine-plug nesokhethi. Ihhanisi lezintambo lixhunywe ngentambo ngocingo ngesixhumi, futhi ukuxhumana phakathi kwehhanisi nezingxenye zikagesi kuxhunywe ngesixhumi noma nge-lug.
Ngokwanda kokusebenza kwezimoto nokusetshenziswa okuthe xaxa kobuchwepheshe bokulawulwa kwe-elekthronikhi, izingxenye ezanda kakhulu zikagesi, izintambo eziya ngokuya zanda, futhi amahanisi wezintambo azoba mkhulu futhi asinde. Ngakho-ke, imoto ethuthukile yethule ukumiswa kwebhasi le-CAN, isebenzisa uhlelo lokudlulisa lwe-multiplex. Uma kuqhathaniswa ne-wiring harness yendabuko, inani lezintambo nezixhumi lincishisiwe kakhulu, okwenza izintambo zibe lula.